Konke odinga ukukwazi ngokufika kwe-HBO Max eSpain | Izindaba zegajethi
Konke odinga ukukwazi ngokufika kwe-HBO Max eSpain
UMiguel Hernandez | 09/09/2021 13:07 | Ama-movie nochungechunge, Ikhaya
HBO Kube semakethe yokusakaza abahlinzeki bokuqukethwe kwe-audiovisual isikhathi eside, ikakhulukazi ihlinzeka ngama-franchise ayifunayo kakhulu. Kodwa-ke, kunezizathu eziningi ezenza abasebenzisi babalekele insizakalo eSpain ngenxa yekhwalithi ephansi yesithombe nokusetshenziswa kwayo okungekuhle, okuthile okuzoba umlando ekugcineni.
I-HBO imemezela ukufika eSpain kwensizakalo ye-HBO Max, sikukhombisa konke okuqukethwe nakho nezinguquko okufanele uzicabangele ukujabulela le nsizakalo. Thola nathi ukuthi ungazuza kanjani ngokugcwele ku-HBO Max futhi usebenzise kakhulu ipulatifomu ngesiqondisi esichazayo.
1 I-HBO Max nokufika kwakhe eSpain
2 Kuthiwani ngokubhaliselwa kwami ​​kwe-HBO kwamanje?
3 Izinguquko namanani kungxenyekazi ye-HBO Max
4 Izoba yini ikhathalogi ye-HBO Max eSpain?
I-HBO Max nokufika kwakhe eSpain
Isevisi ye-HBO Max isetshenziswe isikhathi esithile kwamanye amazwe afana ne-United States of America futhi kulokhu sebenakho iwebhusayithi yakho eSpain. Njengoba kumenyezelwe yi-HBO uqobo, insizakalo ikunikeza izindaba ezinhle kakhulu ezivela ku- I-Warner Bros., I-HBO, iMax Originals, i-DC Comics, iCartoon Network nokunye okuningi, ndawonye okokuqala (okungenani eSpain). Okuthile ngokungangabazeki okuzodala ukungabaza kwabanye babasebenzisi, kepha ungakhathazeki, ngoba size ukuxazulula konke ukungabaza okungavela.
Zilungiselele ukuthandana nepulatifomu entsha yokusakaza ezohlala eSpain ngo-Okthoba 26 #SawubonaHBOMax pic.twitter.com/VwU0s9bawM
- I-HBO Spain (@HBO_ES) September 8, 2021
Into yokuqala ukuthi kucace ukuthi empeleni ngo-Okthoba 26 olandelayo uzokwazi ukujabulela zombili i-HBO ejwayelekile njengayo yonke eminye imikhiqizo yeWarnerMedia futhi yethulwa kwipulatifomu eyodwa ngaphandle kokuthola izinkontileka ngezinsizakalo ezahlukahlukene ngabahlinzeki bethelevishini bendabuko abanjengoMovistar, phakathi kwabanye.
Ngasikhathi sinye i-HBO Max izofika eSpain, Sweden, Denmark, Norway, Finland nase-Andorra kulo Okthoba 26. Kamuva, ukwanda kuzoqhubeka ePortugal, phakathi kwamanye amazwe, yize lezo zinsuku zingakaqinisekiswa.
Kuthiwani ngokubhaliselwa kwami ​​kwe-HBO kwamanje?
Ngamafuphi, akukho lutho oluzokwenzeka. I-HBO izohlinzeka ngesikhathi sokuzivumelanisa nezimo, kepha empeleni lokho abazokwenza ukuthi banyamalale ipulatifomu yendabuko ye-HBO, abaningi abazokulahla ngokuthokozela, futhi idatha izohlanganiswa ngokuzenzekelayo I-HBO Max. Lokhu kusho ukuthi:
Uzokwazi ukungena ku-HBO Max ngemininingwane yakho ye-HBO (abasebenzisi namaphasiwedi)
Imininingwane izogcinwa, igcinwe futhi okuqukethwe kuzophinda kukhiqizwe lapho ubashiye khona
Ngamafuphi, ngo-Okthoba 26 owakho i-akhawunti ye-HBO izoguqulelwa ku-akhawunti ye-HBO Max ngokuzenzakalela futhi uzokwazi ukujabulela konke okuqukethwe onikezwa yipulatifomu entsha.
Izinguquko namanani kungxenyekazi ye-HBO Max
I-HBO ayiqinisekisanga ukuthi kuzoba nokwehluka yini entengo ekhokhiswe abasebenzisi, empeleni, lapho insizakalo isusiwe I-HBO iye ku-HBO Max e-United States of America naseLATAM akukaze kube khona ukukhushulwa kwentengo.
Eqinisweni, ngokubheka ukuthi i-HBO isivele iqinisekisile ukuthi ukudluliswa kwama-akhawunti nolwazi kuzozenzakalela ngokuphelele, Konke kukhombisa ukuthi ngeke kube nokwehluka ekubhaliseni. Futhi, uma usebenzisa i-HBO ngokunikezwa okunikezwa yinkampani yakho yezingcingo noma umhlinzeki wesevisi ye-Intanethi, akukho okuzoshintsha ngoba imininingwane yakho izodlula isuke kwelinye ipulatifomu iye kwenye.
Izoba yini ikhathalogi ye-HBO Max eSpain?
Njengoba usuvele uyazi, i-HBO iyingxenye ye-Warner, ngakho-ke, sizokwazi ukujabulela ikhathalogi ye-HBO ngaphezu ICartoon Network, i-TBS, i-TNT, i-Adult Swym, i-CW, i-DC Universe futhi i amabhayisikobho yenkampani kanye nezinkampani zayo zokukhiqiza ezihambisana nayo njengeNew Line Cinema. Ngaphandle kokungabaza, ikhathalogu izokhula ngosayizi nekhwalithi:
Ama-blockbusters amakhulu, izindaba ezihlabahlosile kakhulu, kanye nezifundo ezingasoze zalibaleka ezisenze saba yilokho esiyikho. Konke ku-HBO Max.
I-DC Universe Franchises
Ukukhishwa kwakamuva kweWarner: Space Jam: New Legends
Ngaphezu kwalokho, banochungechunge lwamalungelo afana neFriends, The Big Bang Theory noma iSouth Park yokwenza ngcono ikhathalogu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Ama-movie nochungechunge » Konke odinga ukukwazi ngokufika kwe-HBO Max eSpain
Ungawubukela kuphi lo mdlalo kule sizini?
I-RoboVac X80 ne-HomeVac H30, kubhejwa izifiso ezintsha kusuka ku-eufy